Disability New Concept Uploaded by milionlineradio at Your Listen
Disability New Concept
This music and or audio is not accessible due to copyright violations ."မြန်မာ့အသံ ရေဒ ..." has been removed due toacopyright notification. Keep exploring! You can find more similar and music and audio here - Disability New Concept
milionlineradio3uploads 10 followers0likes6activities
မြန်မာ့အသံ ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို နားဆင်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်များ မင်္ဂလာရှင် ….. ဒီအစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့က တင်ဆက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ….. (မနွေးဇာခြည်စိုး)
သောတရှင်များရှင် ….. ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လထုတ် အလင်းသစ် မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ သုတ၊ ရသ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၂) မှာ ဆရာမောင်နန္ဒာ ရေးသားပြုစုတဲ့ မသန်စွမ်းမှု အမြင်သစ်ကို ရှုမြင်ခြင်း အကြောင်းကို ဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို နားသောတဆင်ပြီး မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မသန်စွမ်းသူများအပေါ် မသန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာ အမြင်သစ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ရှုမြင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ရှင် ….. (မကေခိုင်စိုး)
(၁) ဧဒင်ရိပ်မြုံ၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ မေတ္တာသည်သာ တတ်စွမ်းနိုင်တာ With love all things are possible. ဖြစ်သည်။ မေတ္တာရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာသည့် ကောင်းကျိုးတရားများနှင့် မေတ္တာမဲ့ခြင်းကြောင့် ရရှိလာသည့် ဆိုးကျိုးတရားများကို လူတိုင်းတွေ့ဖူး၊ ကြုံဖူး၊ သင်ခန်းစာ ယူဖူးကြသည်။ ဤလောက၌ ဆိုးကျိုးတရားများကို မည်သူမျှ မကြုံချင်၊ မဆုံချင်၊ မခံစားချင်ကြပါ။ ကောင်းကျိုးတရားကိုသာ ခံစားချင်ကြသော်လည်း ကောင်းကျိုးရကြောင်းကို လူတိုင်းမသိကြပါ။ သိပြန်ပါကလည်း သိသည့်လူတိုင်းသည် သိသည့်အတိုင်း မကျင့်နိုင်ကြပေ။ ထိုသို့ မသိခြင်း၊ မကျင့်နိုင်ခြင်း၏ အကြောင်းတရားများမှာ မိမိကိုယ်ကို ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် လောကနှင့် စည်းခြားထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် မိမိ၏ အကျိုးစီးပွားကို ပတ်ဝန်းကျင်၏ အကျိုးစီးပွား၊ လောက အကျိုးစီးပွားနှင့် မပေါင်းစပ်နိုင်သော မိမိ သို့မဟုတ် ငါ သို့မဟုတ် အတ္တကြောင့်ဟု ပြောရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင် ငါနှင့်ယှဉ်သော မေတ္တာသည် ကျဉ်းမြောင်းသော မေတ္တာ၊ ခွန်အားချိနဲ့သော မေတ္တာ၊ အတ္တသို့ ဦးတည်သော မေတ္တာဟု ဆိုရပါမည်။ ထိုမေတ္တာမျိုးတွင် ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီး၏ မေတ္တာများ၊ သားနှင့်သမီး၊ မိဘ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၏ မေတ္တာများ အကျုံးဝင်နေပေလိမ့်မည်။ လောကနှင့်ယှဉ်သော မေတ္တာကမူ ကျယ်ဝန်းလှသည်။ ခွန်အား ကောင်းလှသည်။ လောကသို့သာ ဦးတည်နေပေမည်။ ထိုမေတ္တာမျိုးတွင် မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ကုလား မရွေးဘဲ လူသားတိုင်းအပေါ် သက်ဝင်နိုင်သော မေတ္တာ၊ လူသားတို့၏ အကျိုးကိုလိုလားသော မေတ္တာမျိုးဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ဤမေတ္တာနှစ်မျိုးမှာ မေတ္တာ ဟု အခေါ်ချင်း တူသော်လည်း အမျိုးအစားချင်း မတူပါ။ အဆင့်အတန်း၊ အနိမ့်အမြင့်ချင်း မတူပါ။ ရပ်တည်ပုံချင်း မတူပါ။ မေတ္တာကြောင့်ရလာသည့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းပုံချင်း မတူပါ။
(၂) လောကနှင့်ယှဉ်သော မေတ္တာ၊ လောကသို့ ရှေးရှုသော မေတ္တာမျိုးတွင် ဘက်လိုက်သည့် အဂတိသဘောများ မပါဝင်ပါ။ အဂတိသဘောပါလျှင် လောကအကျိုးပြု မေတ္တာမျိုးမဟုတ်ပါ။ ဆန္ဒာ၊ ဒေါသ၊ ဘယာ၊ မောဟ ဆိုသည့် အဂတိလေးပါးဖြင့် ဘက်မလိုက်တော့ပါ။ တစ်စုံတစ်ခုကို အကြောင်းပြု၍ ဘက်လိုက်မိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အဂတိဖက်သည့် မေတ္တာဖြစ်သွားပါသည်။ အဂတိဖက်သည့်မေတ္တာ ဖြစ်သွားသောအခါ ထိုမေတ္တာမှာ စွမ်းရည်များ၊ အားမာန်များ ရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ငါ့သား၊ ငါ့သမီး၊ ငါ့မိဘ၊ ငါ့ဆွေမျိုးအတွက် ထားရှိသည့် ထိုမေတ္တာတွင် အတ္တရှိနေပေတော့မည်။ ထိုမေတ္တာလမ်းကြောင်းတွင် ပြဿနာများ၊ မပြေလည်မှုများ၊ အနိုင်ကျင့်မှုများ၊ ရက်စက်မှုများ ပေါ်လာပေတော့မည်။ ဤသဘောမှာ သေချာသောသဘော၊ မုချသဘောပင် ဖြစ်သည်။ ဤသဘောကို နားလည်လက်ခံလျှင် မသန်စွမ်းမှု အမြင်သစ်၏သဘောကို ကောင်းစွာနားလည် လက်ခံလာမည်ဖြစ်သည်။
(၃) မသန်စွမ်းမှု အမြင်ဟောင်းတွင် မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးဦးကို သန်စွမ်းသူတို့က သနားစရာရှုထောင့်ကလည်း မြင်နိုင်သည်။ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျသူ၊ ရှေးဘ၀၀ဋ်ကြွေးကို ပေးဆပ်နေရသူအဖြစ်လည်း ကောက်ချက်ချ သုံးသပ်သည်။ မိမိတို့၏ ရှေးရိုးစွဲ အစဉ်အလာ၊ ဘ၀နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကပေးသည့် အသိမျိုးစုံနှင့် ကောက်ချက် အမျိုးမျိုးတို့က မသန်စွမ်းမှုကို သမရိုးကျအတိုင်းပင် ရှုမြင်လာကြသည်။ ဤအမြင်အားလုံးသည် အဂတိဖက်သည့် အမြင်များသာဖြစ်ကြောင်း မသန်စွမ်းမှု ရှေးရိုးစွဲအမြင်ရှိသူများက သူတို့ကိုယ်တိုင် မသိနိုင်ခဲ့ကြ။ သူတို့၏အမြင်များ အဂတိဖက်နေကြောင်း ဂရုမပြုမိကြ။ မောင်ဘက မျက်မမြင်ပဲ၊ မောင်နီက နားမကြားပဲ၊ မောင်ညိုက သူငယ်နာအကြောတင်းပဲ၊ မောင်မဲကတော့ ဥာဏ်ရည်နိမ့်ပဲ ဆိုသည့် မျက်မမြင်၊ နားမကြားစသည့် မပြည့်စုံမှုတစ်ခုခုကို အစွဲပြုအဂတိဖက်ပြီး မောင်ဘကိုလည်းကောင်း၊ မောင်နီကို လည်းကောင်း၊ မောင်ညိုကိုလည်းကောင်း၊ မောင်မဲကိုလည်းကောင်း လူမှုဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်က ဘေးဖယ် ထားလိုက်ကြသည်။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှ လူအများစုသည် ထိုသို့ တစ်စုံတစ်ခု ချို့ယွင်းအားနည်း မပြည့်စုံသူတို့နှင့် လက်မတွဲချင်တော့။ ထိုသူတို့တွင် ငုပ်လျှိုးပုန်းကွယ်နေသည့် စွမ်းရည်များကို မဖော်ထုတ်ချင်တော့။ အသိအမှတ် မပြုလိုတော့။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ တစ်စုံတစ်ခု မပြည့်စုံမှုအပေါ် သန်စွမ်းသူ အများထုက အဂတိဖက် အမြင်မျိုးဖြင့်သာ မြင်နေကြ၍ဖြစ်သည်။ ထိုသို့မြင်နေကြဦးမည်ဆိုလျှင် ထိုလူမှု ပတ်ဝန်းကျင်သည် နေချင်စဖွယ်ကောင်းတော့မည် မဟုတ်တော့။ သာယာသည့် လှုမှုပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်တော့မည် မဟုတ်တော့။ ဤသို့ဆိုရခြင်းမှာ ၁၀% မျှသော မသန်စွမ်းသူတို့၏ မျက်ရည်များ၊ သက်ပြင်းချသံများ၊ အထီးကျန်ဆန်မှုများ၊ လူသားဆန်ဆန် မခံစားရဘဲ လူ့သိက္ခာကျမှုများ စသည့် ရင်နင့်ဖွယ်၊ ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်များအဖြစ် ရှည်ကြာနေဦးမည်မှာ သေချာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
(၄) အဂတိဖက်သော မေတ္တာတွင် ငါနှင့်ငါဦးစီးသော အသိုင်းအ၀န်းချမ်းသားရေး၊ လွတ်မြောက်ရေးကိုသာ ရှေးရှုသည်။ အခြားလူသားများကို ငါဦးစီးသော မေတ္တာက ကန့်ထားသည်။ ငြင်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် ငါဦးစီးသော မေတ္တာဝန်းကျင်၌ လောဘအမှောင်များလျက်ရှိသည်။ ထိုသို့ပင် ဒေါသမီးများ ဟုန်းဟုန်း တောက်လျှက်ရှိသည်။ မာနလေများ ဟူးဟူးထန်လျှက်ရှိသည်။ ငြိမ်းချမ်းခြင်းဟူ၍ မရှိတော့။ ဤသည်မှာ လူတိုင်းမြင်နေ၊ တွေ့နေရသော လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏ အနိဋ္ဌာရုံများသာ ဖြစ်တော့သည်။ မသန်စွမ်းမှု အမြင်သစ်တွင် မသန်စွမ်းသူ တစ်ဦးအတွက်သာ သိက္ခာရှိရေး၊ အများနှင့်တန်းတူ နေနိုင်ရေးအတွက် မဟုတ်ပေ။ မသန်စွမ်းသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း အများနည်းတူ တန်းတူနေနိုင်ခြင်း ဆိုသည်မှာလည်း ဤလူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိနေနိုင်သော ရှိကောင်းသော ရှိနိုင်သော အရာမဟုတ်ပေ။ မသန်စွမ်းသူ လူသားတစ်ရပ်လုံး သိက္ခာရှိရှိနေနိုင်ခြင်း၊ အခြားလူသားများနည်းတူ အခွင့်အလမ်းတန်းတူရရှိခြင်းတို့ ရှိပါမှ မသန်စွမ်းသူ တစ်ဦးချင်းတို့၏ ဘ၀အစစ်အမှန် ငြိမ်းချမ်းခြင်းဖြစ်လာပေမည်။ နေချင့်စဖွယ် လူသားပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ပေါ်လာပေမည်။ ဤသို့ဆိုရခြင်းမှာ မသန်စွမ်းသူ လူသားထုသည် လူမှုဝန်းကျင်ထဲတွင် ၁၀%မျှသော လူဦးရေအဖြစ် အသက်ရှင် ပါရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုမသန်စွမ်းထု၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများပါ လူမှုဝန်းကျင်ထဲ၌ ရှိနေဦးမည် ဖြစ်သောကြောင့် မျက်မှောက် ကမ္ဘာတွင် မသန်စွမ်းသူ လူသားထုတစ်ရပ်လုံး ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးသည် လူမှုဝန်းကျင်၏ အရေးပါသော အရေးကိစ္စကြီး တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားနေပါသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်ဖြစ်စေ၊ မသန်စွမ်းသူ တစ်စုတစ်ဖွဲ့အတွက်ဖြစ်စေ သိက္ခာရှိရေး၊ အများနှင့်တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိရေးကို ဦးတည်လျှက် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကွက်၍ လည်းကောင်း၊ ၀ိုင်း၍လည်းကောင်း၊ ဖန်တီးပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်ပါ။ ဥပမာ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူ၊ နားမကြားသူ၊ မျက်စိမမြင်သူတို့ လူမှုဝန်းကျင်ထဲ လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ၀င်ဆံ့နိုင်ရေးအတွက် ပြတိုက်များ၊ အများဆိုင် အဆောက်အအုံများ၊ ပန်းခြံများ၊ ကားများ၊ ရထားများ၊ လမ်းများ၌ မသန်စွမ်းသူတို့ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ရန် ဖန်တီးပြုပြင်ထားရပါမည်။ ထို့ကြောင့် မသန်စွမ်းသူတစ်ဦး သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းသူ တစ်စုအတွက်သာ ဖန်တီးပြုပြင်၍မရကြောင်း၊ အထက်တစ်နေရာတွင် ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် တစ်စုတစ်ဖွဲ့အတွက် အဂတိဖက်၍ မရကြောင်း ထင်ရှားသော သာဓက တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မသန်စွမ်းမှုအမြင်သစ်သည် တစ်စုံတစ်ဦး သို့မဟုတ် လူတစ်စုကိုသာ အထူးပြု စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အထူးကျောင်းများ တည်ထောင်ပေးခြင်း၊ ဂေဟာများ ထူထောင်ပေးခြင်းတို့ကို ငြင်းပါသည်။ ဤသို့ငြင်းရခြင်းမှာ ထိုလုပ်ငန်းများသည် မသန်စွမ်းသူများကို အမှီခိုခံများအဖြစ် ရှုမြင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အမှီခိုခံများဟု မသန်စွမ်းသူများကို ရှုမြင်ခြင်းသည်ပင် အဂတိဖက်အမြင်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်နိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ် အဂတိဖက်လိုသော အမြင်ဖြင့်ရှုမြင်ခြင်း မဟုတ်သော်လည်း ထိုအမြင်တွင် အဂတိသဘော ပါဝင်နေကြောင်း သိသာလှပါသည်။ ထို့အပြင် အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများသည် မသန်စွမ်းထုတစ်ရပ်လုံး အကျုံးမ၀င်သော အကျိုးဆောင်မှုကြောင့်ဟုလည်း ဆို၍ရနိုင်ပါသည်။ စင်စစ် မသန်စွမ်းသူ လူသားထု တစ်ရပ်လုံး၏အရေးသည် မသန်စွမ်းသူ တစ်ဦးစီနှင့်သာမက သန်စွမ်းသူ လူသားတစ်ရပ်လုံး၏ အရေးဟုဆိုရပါမည်။
(၅) မိသားစုမေတ္တာမျိုးဖြင့် မသန်စွမ်းမှု အမြင်သစ်အရေးကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လောကနှင့် ယှဉ်သော မေတ္တာမျိုးဖြင့်သာ လူသားထုတစ်ရပ်လုံး၏ အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ရပါသည်။ မသန်စွမ်းသူ လူသားထု၏ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းခြင်းသည် လူသားထု တစ်ရပ်လုံး၏ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။ လောကနှင့်ယှဉ်သော မေတ္တာ၊ လောကသို့ရှေးရှုသောမေတ္တာမျိုး ထားရှိနိုင်လျှင် ထိုမေတ္တာမျိုးသည် အရာရာကို စွမ်းနိုင်သော အောင်နိုင်သော အင်အားများ ဖြစ်လာ ပေတော့မည်။ လောကနှင့်ယှဉ်သော မေတ္တာထားရှိလာလျှင် မျက်မမြင်ကို မျက်မမြင်ဟု မမြင်နိုင်တော့။ နားမကြားကို နားမကြားဟု မထူးမပြုတော့။ ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူကို ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူဟု သီးခြား မခံစားတော့။ ထိုသူတို့ မပြည့်စုံသလို လူတိုင်းကိုယ်စီ ပြည့်စုံကြသည်မဟုတ်ဟု ခံယူပြီး ဖြစ်နေကြပေမည်။ No man is perfect. ဆိုသကဲ့သို့ လူတိုင်း ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင် မဟုတ်ကြသည်ကိုတော့ အများလက်ခံပြီး ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလား။ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ကိုယ်အင်္ဂါသန်စွမ်း ပြည့်စုံသည်၊ နားကြားသည်၊ မျက်စိမြင်သည်၊ ဥာဏ်ရည်ကောင်းသည်၊ သို့သော် ထိုသူသည် တစ်ပါးသူ၏ ပစ္စည်းဥစ္စာကို မတရားလိုချင်မှုနှင့် ခိုးသည်။ လုယက်သည်။ နှိပ်စက်သည်။ တစ်ပါးသူကို သတ်သည်။ ထိုသူကို ပြည့်စုံသူဟုဆို၍ ရပါမည်လား။ ထို့အတူ တစ်ပါးသူ၏ အိမ်ယာကို ပစ်မှားသူ၊ အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သော ဥစ္စာကို လိမ်လည်ခိုးဝှက်သူ၊ ဒေါသကြီးလွန်းသူ၊ မာနထောင်လွန်းသူ၊ အတ္တထူလွန်းသူတို့ကိုရော ပြည့်စုံသူများဟု ဆိုနိုင်ပါမည်လား။ စင်စစ် ထိုသူများသည်သာ မသန်စွမ်းသူများ ဖြစ်ကြသည်ဟု ဆိုရပါမည်။ ဤသို့လျှင် အပြန်အလှန်ရှုမြင်ထားသော လူသားအမြင်ဖြင့် မသန်စွမ်းသူတို့အား သန်စွမ်းသည့် တစ်နေရာက လောကအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ ပါဝင်ခွင့်ပေးမည် ဆိုပါလျှင် မသန်စွမ်းသူတို့သည် လောကအကျိုးပြု လူသားများ မုချဖြစ်လာပေတော့မည်။ မသန်စွမ်းသူတိုင်းကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာက သန်စွမ်းရမည်ဟု အကြွင်းမဲ့ ဆိုနေခြင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ အကြွင်း ရှိနေပါမည်။ ယင်းမှာ လောကသဘာဝပင် မဟုတ်ပါလား။
မသန်စွမ်းသူတို့အပေါ် ထားရမည့် လူကိုလူကဲ့သို့မြင်ရေးသည် လွယ်လှသည်တော့ မဟုတ်။ မလွယ်သော်လည်း လူကိုလူကဲ့သို့မြင်အောင်ကြည့်ရေးမှာ လူသားတိုင်း၏ လူသားတာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ လူကိုလူကဲ့သို့မြင်ရေးတွင် ကုလားကို ကုလား၊ တရုတ်ကို တရုတ်ဆိုသော အသိများကိုဖုံခါချပြီး လူဟုပင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမြင်ပါမှ လူကိုလူကဲ့သို့မြင်သည့်အမြင်၊ လူသားအမြင်ဖြစ်တော့သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးသည် တရုတ်ကို တရုတ်၊ ကုလားကို ကုလား၊ သူဋ္ဌေးကို သူဋ္ဌေး၊ ဆင်းရဲသားကို ဆင်းရဲသား စသည်ဖြင့် လူ၏အပေါ်ယံ အရောင်အဆင်းများကိုသာ အဓိကထားမြင်နေပါမူ ထိုသူ၌ လူသားအမြင် မရှိသေးဟုဆိုရပါမည်။ လူသားအမြင် မရှိသေးသောကြောင့် ထိုသူသည် မသန်စွမ်းသူတို့အပေါ် မျက်မမြင်ဟု လည်းကောင်း၊ နားမကြားဟု လည်းကောင်း၊ ဥာဏ်ရည်နိမ့်ဟု လည်းကောင်း ….. လူသားဖြစ်ခြင်းကို ခုန်ကျော်၍ နားလည်ခံစားနေဦးမည်။ သူ၏ မေတ္တာသည်လည်း မိသားစုမေတ္တာမှ မည်သည့်အခါမျှ လွတ်မြောက်တော့မည် မဟုတ်တော့။ စွမ်းနိုင်သော မေတ္တာဆိုသည်မှာ အများအကျိုးကို အမှန်တကယ် လိုလားသော မေတ္တာမျိုးသာ ဖြစ်တော့သည်။ (မနွေးဇာခြည်စိုး)
မညှိုးပန်းတို့၏ဒိုင်ယာရီကဏ္ဍကို နားသောတဆင်ပြီး ဝေဖန်အကြံပြုလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ရုံး၊ အမှတ် (၁၆)/ဘီ၊ ရေတွင်းကြီးလမ်းသွယ်၊ သာယာအေးလမ်း၊ ရဲရန်အောင်မှတ်တိုင်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ဖုန်း - ၀၉-၄၅၀၀၆၇၂၄၇ သို့လည်းကောင်း၊ အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ်လိုပါက mili.onlineradioprogram@gmail.com သို့ လည်းကောင်း ပေးပို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ သောတရှင်အားလုံးရဲ့ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို ၀မ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုလက်ခံနေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ….. (မနွေးဇာခြည်စိုး)
ယခုအစီအစဉ်လေးကို မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့၊ Myanmar Independent Living Initiative မှ စီစဉ်တင်ဆက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ပတ် ယခုလို အချိန်မျိုးမှာလည်း မညှိုးပန်းတို့၏ဒိုင်ယာရီ အစီအစဉ်လေးကို ဆက်လက် တင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စောင့်မျှော်အားပေး နားဆင်နိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးလိုပါတယ်။ (မနွေးဇာခြည်စိုး)